Raysulwasaaraha Boqortooyada Ingiriiska Theresa May oo tagtay Turkiga - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeUncategorizedRaysulwasaaraha Boqortooyada Ingiriiska Theresa May oo tagtay Turkiga
January 28, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh Uncategorized, World 0
Raysulwasaaraha Boqortooyada Ingiriiska Theresa May oo tagtay Turkiga. [Sawirka: Anadolu]
Ankara-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha Boqortooyada Ingiriiska Theresa May ayaa maanta oo Sabti ah tagtay magaalada Ankara ee caasimada dalka Turkiga, halkaas oo ay kulan kula yeelatay madaxweynaha Turkiga.
Sida ay ku warantay wakaalada wararka Turkiga ee Anadolu, May ayaa kulan kula yeelatay Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan gudaha xarunta madaxtooyada.
Labada hoggaamiye ayaa la filayaa in ay ka wadahadlaan arrimo badan oo ay kamidyihiin, la dagaalanka Daacish iyo xaalada Suuriya sidoo kale adkaynta xiriirka ka dhaxeeya labada dal ee dhanka ganacsiga iyo siyaasada.
Waa markii kowaad oo Theresa May ay safar ku tagto dalka Turkiga iyada oo ah raysulwasaare.
Sidoo kale waxaa la filayaa in ay kulan la yeelato Raysulwasaaraha Turkiga Binali Yildirim, iyadoo markaas kadib ay wada qaban doonaan shir jaraa’id.